तपाईंको राशि के हो ? ज्योतिषशास्त्र भन्छ यी चार राशि भएका व्यक्ति… - हिमगाथान्यूज
Home धर्म दर्शन तपाईंको राशि के हो ? ज्योतिषशास्त्र भन्छ यी चार राशि भएका व्यक्ति…
तपाईंको राशि के हो ? ज्योतिषशास्त्र भन्छ यी चार राशि भएका व्यक्ति…
ज्योतिष शास्त्रले व्यक्तिको उत्तम समय, खराव समय त्यसबाट बच्न प्रयोग गर्ने विधि र तरिका बारेपनि व्याख्या गरेको हुन्छ ।ज्योतिषमा राशि अनुसार मानिसले धन सम्पत्ति आदी कमाउन योग्य हुन्छ ।
ज्योतिष अनुसार कुनै राशीका मानिसलाई धन बढी मात्रामा फाप्छ भने कुनै राशी भएकालाई विद्या आदी ।यी चार राशि भएका मासिन मिहेनतमा विश्वास राख्छन् । त्यस्तै उनीहरुलाई धन आर्जन कसरी हुन्छ भन्ने पनि जानकारी हुन्छ ।
सिंह राशि भएकाहरु भीडमा आफ्ना पहिचान बनाउनका लागि लागि पर्छन् । उनीहरु आफ्नो पहिचान अरुको भन्दा फरक बनाउँन खोज्छन् । उनीहरुको उदेश्य अरुले याद गरुन् भन्ने खालको हुन्छन् ।
यी राशि भएका मानिसहरु महंगो खालको मोबाइल बोक्ने खालका गाडी मा घुम्ने खालका हुन्छन् जसका कारण अरु मानिसले उनीहरुलाई नोटिश गरुन् । जसका लागि धनको आवश्यकता त पर्छनै । यो राशि भएकाहरु पनि आर्थिक रुपमा सवल हुन्छन् ।
Previous articleमहाभारतका रहस्यमा लुकेका कथा
Next articleयस्तो मन्दिर, जहाँ भगवानको आशिर्वाद मात्र होइन ऋण पनि पाइन्छ